Забур 78 CARS - Nnwom 78 ASCB
1Ao me nkurɔfoɔ, montie me nkyerɛkyerɛ;
monyɛ aso mma mʼanomu nsɛm.
2Mɛkasa wɔ abɛbuo mu,
mɛka ahintasɛm, teteete nneɛma no,
3nneɛma a yɛate na yɛahunu;
nneɛma a yɛn agyanom aka ho asɛm akyerɛ yɛn.
4Yɛremfa nkame wɔn mma;
yɛbɛka akyerɛ nkyirimma;
Awurade nneyɛɛ a ɛfata nkamfo no,
ne tumi ne anwanwadeɛ a wayɛ no.
5Ɔyɛɛ ahyɛdeɛ maa Yakob
na ɔyɛɛ mmara wɔ Israel,
deɛ ɔhyɛɛ yɛn nananom
sɛ wɔnkyerɛ wɔn mma,
6sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, nkyirimma bɛsua
mpo mmɔfra a wɔnnya nwoo wɔn,
na wɔn nso akyerɛkyerɛ wɔn mma.
7Afei wɔde wɔn ho bɛto Onyankopɔn so,
na wɔn werɛ remfiri ne nneyɛɛ,
na wɔbɛdi nʼahyɛdeɛ so.
8Wɔrenyɛ sɛ wɔn nananom,
a na wɔyɛ asoɔdenfoɔ ne atuatefoɔ,
wɔn a wɔn akoma mu wɔnni Onyankopɔn nokorɛ
na woyɛ honhom mu atorofoɔ ma noɔ no.
9Ɛwom sɛ na Efraim mmarima kurakura agyan,
nanso ɔko da no, wɔdwaneeɛ;
10Wɔanni Onyankopɔn apam no so
wɔampɛ sɛ wɔdi ne mmara no so.
11Wɔn werɛ firii deɛ wayɛ,
anwanwadeɛ a wayɛ akyerɛ wɔn no.
12Ɔyɛɛ anwanwadeɛ wɔ wɔn nananom anim
wɔ Soan mantam a ɛwɔ Misraim asase so.
13Ɔkyɛɛ ɛpo mu na ɔde wɔn faa mu.
Ɔmaa nsuo no gyinaa sɛ afasuo.
14Ɔde omununkum dii wɔn anim awia
na ɔde ogyadum dii wɔn anim anadwo nyinaa.
15Ɔpaee ɔbotan mu wɔ ɛserɛ so,
na ɔmaa wɔn nsuo a ɛdɔɔso sɛ ɛpo;
16Ɔmaa asutire firii abotan mu
na ɔmaa nsuo tenee sɛ nsubɔntene.
17Nanso, wɔkɔɔ so yɛɛ bɔne tiaa no,
wɔsɔre tiaa Ɔsorosoroni no wɔ ɛserɛ no so.
18Wɔboapa sɔɔ Onyankopɔn hwɛeɛ;
wɔbisaa aduane a wɔpɛ.
19Wɔkasa tiaa Onyankopɔn sɛ,
“Onyankopɔn bɛtumi ato ɛpono wɔ ɛserɛ so anaa?
20Ɔde adeɛ bɔɔ ɔbotan mu no, nsuo to firi mu baeɛ,
na nsuwa bebree tenee hɔ.
Na ɔbɛtumi ama yɛn aduane nso?
Ɔbɛtumi ama ne nkurɔfoɔ ɛnam anaa?”
21Ɛberɛ a Awurade tee deɛ wɔreka no, ne bo fuu yie;
ne ogya bɛguu Yakob so,
na nʼabufuhyeɛ sɔre tiaa Israel,
22ɛfiri sɛ, na wɔnni Onyankopɔn mu gyidie
anaasɛ ne nkwagyeɛ mu ahotosoɔ.
23Nanso, ɔkasa kyerɛɛ ɔsoro ɔhyɛ so;
na ɔbuee ɔsorosoro apono.
24Ɔtɔɔ mana firi soro maa nnipa no sɛ wonni,
ɔmaa wɔn ɔsoro aduane.
25Nnipa dii abɔfoɔ aduane;
ɔmaa wɔn aduane a wɔbɛtumi adi nyinaa.
26Ɔmaa apueeɛ mframa bɔ firii sorosoro,
na ɔde ne tumi bɔɔ atɔeɛ mframa.
27Ɔtoo ɛnam sɛ mfuturo guu wɔn so,
nnomaa a wɔtu bebree sɛ mpoano anwea.
28Ɔma wɔbaa fam kɔɔ wɔn atenaeɛ,
ne wɔn ntomadan ho nyinaa.
29Wɔdidi maa aduane no boroo wɔn so
ɛfiri sɛ ɔmaa wɔn deɛ wɔhwehwɛ.
30Nanso ansa na wɔbɛfiri aduane a wɔhwehwɛeɛ no ho,
ɛberɛ a ɛhyehyɛ wɔn anomu mpo no,
31Onyankopɔn abufuo sɔree wɔn so;
ɔkum ahoɔdenfoɔ a wɔwɔ wɔn mu
twitwaa Israel mmeranteɛ guiɛ.
32Yeinom nyinaa akyi, wɔkɔɔ so yɛɛ bɔne;
nʼanwanwadeɛ akyi no, wɔannye anni.
33Enti, ɔtwaa wɔn nna so te sɛ ahuro
yɛɛ wɔn mfeɛ awieeɛ huhuuhu.
34Ɛberɛ biara a Onyankopɔn bɛkum wɔn no, wɔhwehwɛɛ no,
na wɔpere wɔn ho sane baa ne nkyɛn.
35Wɔkaee sɛ Onyankopɔn yɛ wɔn botan,
sɛ Ɔsorosoro Onyankopɔn no yɛ wɔn Gyefoɔ.
36Nanso, wɔde wɔn ano bɛdaadaa no,
na wɔde wɔn tɛkrɛma twaa atorɔ kyerɛɛ no;
37wɔn akoma anni no nokorɛ,
na wɔanni nʼapam no so.
38Nanso na ɔyɛ ahummɔborɔ;
ɔde wɔn amumuyɛ kyɛɛ wɔn
a wansɛe wɔn.
Mpɛn bebree ɔtwentwɛnee nʼabufuo so
na wanhwie nʼabufuhyeɛ nyinaa.
39Ɔkaee sɛ wɔyɛ ɔhonam ara kwa,
mframa bi a ɛbɔ twam na ɛnsane nʼakyi.
40Mpɛn ahe na wɔansɔre antia no wɔ ɛserɛ no so hɔ,
na mpɛn ahe na wɔamma ne werɛ anho wɔ asase wesee no so?
41Wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛeɛ ɛberɛ biara;
na wɔyii Israel Ɔkronkronni no abufuo.
42Wɔn werɛ firii ne tumi no,
ɛda a ɔgyee wɔn firii wɔn nhyɛsofoɔ nsam no,
43ɛda a ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnneɛ nwanwasoɔ wɔ Misraim no
ne nʼanwanwadeɛ wɔ Soan mantam mu no.
44Ɔmaa wɔn nsubɔntene danee mogya;
wɔantumi annom wɔn asutene mu nsuo.
45Ɔmaa nwansenadɔm baa wɔn so bɛhaa wɔn
na mponkyerɛne nso bɛsɛee wɔn asase.
46Ɔmaa mmɛbɛ bɛdii wɔn mfuo so aduane
na ɔde wɔn mfudeɛ nso maa ntutummɛ.
47Ɔde asukɔtweaa sɛee wɔn bobe
na ɔde nsukyeneeɛ sɛee wɔn ankye nnua.
48Ɔde sukyerɛmma kumm wɔn anantwie
ɔde anyinam kumm wɔn nyɛmmoa.
49Ɔhwiee nʼabufuhyeɛ guu wɔn so,
abufuo, anibereɛ ne ahohia;
abɔfoɔ asɛefoɔ kuo no.
50Ɔbɔɔ ɛkwan maa nʼabufuo;
na wamfa wɔn nkwa ankyɛre wɔn
mmom ɔde wɔn maa ɔyaredɔm.
51Ɔkunkumm Misraimfoɔ mmakan nyinaa,
Ham ntomadan mu nnipa mu abakan.
52Nanso ɔyii ne nkurɔfoɔ firii mu sɛ nnwankuo;
ɔdii wɔn anim sɛ nnwan wɔ ɛserɛ no so.
53Ɔdii wɔn anim dwoodwoo, enti wɔansuro;
nanso wɔn atamfoɔ deɛ, ɛpo asorɔkye bu faa wɔn so.
54Sei na ɔyɛ de wɔn baa nʼasase kronkron no ahyeɛ so,
bepɔ asase a ɔde ne nsa nifa gyeeɛ no.
55Ɔpamoo amanaman a wɔwɔ wɔn anim no
na ɔkyekyɛɛ wɔn nsase no mu maa wɔn sɛ wɔn agyapadeɛ;
ɔbɔɔ Israel mmusuakuo no atenaseɛ wɔ wɔn afie mu.
56Nanso wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛeɛ
na wɔsɔre tiaa Ɔsorosoroni no;
na wɔanni ne mmara so.
57Wɔyɛɛ sɛ wɔn agyanom, wɔanni nokorɛ na wɔannya gyidie,
ahotosoɔ nni wɔn mu, na wɔte sɛ agyan a asɛe.
58Wɔde wɔn sorɔnsorɔmmea hyɛɛ no abufuo
na wɔn ahoni maa ne ninkuntwe mu yɛɛ den.
59Onyankopɔn tee wɔn nka no, ne bo fuiɛ;
na ɔpoo Israel korakora.
60Ɔgyaa nʼatenaeɛ a ɛwɔ Silo no hɔ
ntomadan a wasi wɔ nnipa mu no.
61Ɔde Apam Adaka a ɛyɛ ne tumi no kɔɔ nnommumfa mu,
nʼanimuonyam kɔɔ atamfoɔ nsam.
62Ɔde ne nkurɔfoɔ maa akofena;
ne bo fuu nʼagyapadeɛ yie.
63Egya hyee wɔn mmeranteɛ kumm wɔn,
na wɔn mmabaawa annya ayeforɔhyia dwom anto;
64Wɔn asɔfoɔ wuwuu akofena ano,
na wɔn akunafoɔ antumi ansu.
65Afei Awurade sɔree sɛdeɛ ɔfiri nna mu no,
sɛdeɛ ɔbarima a waboro nsã nyane firi nnahɔɔ mu no.
66Ɔbobɔɔ nʼatamfoɔ ma wɔdwane kɔɔ wɔn akyi;
ɔhyɛɛ wɔn aniwuo afebɔɔ.
67Afei ɔpoo Yosef ntomadan no,
na wamfa Efraim abusuakuo no nso;
68Na mmom, ɔfaa Yuda abusuakuo no,
Bepɔ Sion a ɔdɔ noɔ no.
69Ɔsii ne kronkronbea te sɛ sorɔnsorɔmmea,
te sɛ asase a ɛtim hɔ daa.
70Ɔyii ne ɔsomfoɔ Dawid;
ɔfrɛɛ no firii nnwammuo mu
71firii nnwan akyiridie, na ɔde no baeɛ
sɛ ɔmmɛyɛ odwanhwɛfoɔ mma ne nkurɔfoɔ Yakob,
mma Israel a wɔyɛ nʼagyapadeɛ.
72Na Dawid de akoma pa hwɛɛ wɔn so
na ɔde ne nimdeɛ dii wɔn anim.
ASCB : Nnwom 78